Umqeqetshi weqembu lenguqu eleFC Platinum uNorman Mapeza
Iqembu lenguqu ele FC Platinum lizakwemukela ele Horoya AC ngoMgqibelo enkundleni ye Barbourfields ko Bulawayo emdlalweni wesithathu owesibaya sika Group B somncintiswano wamazwe awezwekazi leAFrica owe Total CAF Champions League.
Womabili lawa maqembu alomklomelo owodwa ngemva kokuba sekudlalwe imidlalo emibili kumidlalo eyezibaya okudale ukuba umqeqetshi weqembu le FC Platinum uNorman Mapeza athi akulamehluko omkhulu phakathi kwamaqembu womabili.
Sisesimeni esifanayo leqembu le Horoya kodwa thina siyabe sidlala singekhaya njalo nxa sifuna ukuthuthukisa amathuba ethu awokudlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano kuzamele sinqobe.
Imidlalo efana lalo iya ngokuthi abadlali baqine kangakanani engqondweni yabo yikho ke kusemandleni abo amajaha ukuba bebophe ziqine ukuze sithole impumela ethokozisayo.
Iqembu le FC Platinum lilomklomelo owodwa ngemva kokuba libe ngutshiki lobhanqa 0 – 0 leqembu le Orlando Pirates elase South Africa emdlalweni walo wakuqala ikanti emdlalweni walo wesibili linqotshwe nge 2 ka nya ngele Esperance elase Tunisia.
Ngakwelinye icele iqembu le Horoya lona lilomklomelo owodwa eliwuthole lize libe ngutshiki lobhanqa 1 ka 1 lele Esperance ngosuku lwakuqala olwemidlalo eyezibaya ikanti emdlalweni walo owesibili litshaywe nge 3 ka nye ngele Orlando Pirates.
Lokhu kutsho ukuba iqembu le Orlando Pirates lele Esperance alemiklomelo emine iqembu ngalinye kusithi ele Pirates lihlezi esiqongweni sengalane ka Group A ngoba lingakahlohlwa.
Umdlalo ozakuba phakathi kweqembu le FC Platinum lele Horoya AC uzadlalwa ngehola lesithathu emini kube sekusithi ebusuku ngehola lethoba munwe munye iqembu le Orlando Pirates lizangqikilana lele Esperance enkundleni ye Orlando Stadium kwele South Africa.
Inkundla ye Barbourfields yayigcwele phamu mhla iqembu le FC Platinum lidlala lele Orlando Pirates njalo abalandeli abanengi babesekela iqembu le South Africa kodwa lesisimo sikhangelelwe ukuntshintsha abalandeli besekele iqembu lasekhaya loba nje kungakhangelelwanga ukuba inkundla igcwale.
Amaqembu lawa azadibana kulimpelaviki azaphinda edibane njalo mhla zilitshumi lambili kuyonale inyanga kaNhlolanja lapho iqembu le Horoya AC elizemukela khona ele FC Platinum kuthi ele Orlando Pirates lizavakatshela ele Esperance khonale kwele Tunisia.
Amaqembu azaqeda imidlalo yezibaya esendaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano.